Daawo Sawiro: Gudoomiye Jawaari iyo Wafdigiisa oo la kulmey Jaaliyadda Soomaliyeed ee Talyaaniga. – idalenews.com
Daawo Sawiro: Gudoomiye Jawaari iyo Wafdigiisa oo la kulmey Jaaliyadda Soomaliyeed ee Talyaaniga.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo wafdi uu hogaaminayo ay ku suganyihiin dalka Talyaaniga ayaa xalay magaalada Rome kulan kula qaatay Jaalliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Talyaaniga.
Kulankan oo ka dhacay hotel ku dhow dhismaha Safaaradda Soomaaliya ee magaalada Rome ayaa waxaa kasoo qeybgalay Jaalliyadda Soomaaliyeed oo iyagu ka kala yimid gobollada kala duwan ee Dalkan Talyaaniga ayadoo ugu horeynna ay ka hadleen xubnaha Jaalliyadda kuwaasi oo iyagu muujiyey sida ay ugu faraxsanyihiin iney la kulmaan Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo wafdigiisa.
Safiirka Dowladda Soomaaliya u fadhiya dalkan Talyaaniga Danjire Muuse Xasan oo isaguna hadal kooban ka jeediyey kulanka ayaa ugu horeyn ku ammaanay Jaalliyadda Soomaaliyeed ee Talyaaniga sida ay usoo dhaweeyeen islamarkaana ay safaaradda ula shaqeeyaan waxaana uu dhanka kale ballan qaaday iney safaaraddu ka shaqeyn doonto wax ka qabashada dhibaatooyinka dalkan ay kala kulmaan Soomaalida.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo isaguna kulanka khudbad ka jeediyey ayaa ugu horeyn Jaalliyadda u sharaxay halka ay mareyso xaaladda dalka iyo hormarradii ugu dambeeyey ee uu ku talaabsaday Golaha Shacabka Soomaaliya waxaana uu dhanka kale ku booriyey Jaalliyaddaha Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan iney u istaagaan sidii dalkooda ay ugu soo laaban lahaayeen islamarkaana dowladnimadooda uga shaqeyn lahaayeen.
Kulanka intii uu socday waxaa su’aallo ay ku weeydiiyeen xubnihii Jaalliyadda ee kasoo qeybgalay Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Wafdigiisa Xildhibaannada ah ayadoo su’aallahaasina ay ku qotomeen howlaha Baarlamaanka waxyaabaha u qabsoomay, waxa horyaala iyo qaabka uu noqon doono wadashaqeynta Baarlamaanka iyo Xukuumadda ayadoo isla xisaabtanna uusan meesha ka marneyn.
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya ee qeybta ka ah wafdiga Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa uga jawaabay Jaalliyadda Soomaaliyeed ee dalkan Talyaaniga ayaga oo tallooyin iyo bogaadinna u jeediyey Jaalliyadda.
Kulanka oo kusoo gebageboobay jawi farxadeed ayaa waxaa dhammaadkii uu Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ka jeediyey Duco isaga oo Allena ka baryey in Umadda Soomaaliyeed qalbigeeda uu u mideeyo iney aayaha dalkooda iyo dowladnimadooda usoo wada jeestaan.
Ciidamo ka socda Uganda oo ilaaliya Xarumaha QM oo Muqdisho imaanaya maanta.
Garabka Barre Hiiraale oo war cusub kasoo saaray qorshaha R/W Cabdi Weli.